Sadaasaa 08, 2017
Mana murtii olaanaa Federaalaa dhaddacha 4ffaa tti deemsi ragaa ittisaa dhaggeefachuu Wiixata darbee jalqabamee ture Kibxata kaleessaa waaree boodaa kaasee addaan cite jira.Kaleessa yeroo addaan cite sana immo manni murtii ibsa kenne hin qabu jedhu Abukaatoo Wandimmuu Ibsaa.
Har’a ganama mana murtii yeroo dhaqqaban himatamtoonni mana hidhaa Qilinxoo irraa fidaman hin jiran ka jedhan Obbo Wandimmuun abbaan alangaas ta’e abbootiin murtii hin jiran turan jedhan. Sana booda dhaddacha 4ffaa tti dhimmi namoota biraa ilaalamaa waan tureef seeneen waa’een bellama namoota galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himatamanii maal ta’e? jedhee gaaffii ergan dhiyeessee booda Sadaasa 6 bara 2010 tti bellama kenninee jirra naan jedhan jedhu.
Maatiin hidhamtootaa gara mana hidhaa Qiliinxoo dhaquun himatamtoota waliin wal arguu isaanii fi namnii gara mana murtii deemaa jedhee nutti himee tokko iyyu hin jiru jechuu isaanii Raadiyoo Sagalee Amerikaaf ibsanii jiru.
Gaaffii fi Deebii maatii fi abokaatoo waliin gaggeeffame caqasaa.
Manni Murtii Keeniyaa Lammilee Itiyoophiyaa seeraan ala biyyattii Seenan 137’irratti murtee dabarse